Umaki: kanjani i-wordpress | Martech Zone
Maka: indlela ye-wordpress
Ungayidlulisa kanjani iSayithi lakho le-WordPress ku-New Domain
NgoLwesibili, Novemba 26, 2019 NgoLwesibili, Novemba 26, 2019 Douglas Karr
Uma usebenzisa isayithi lakho le-WordPress kumphathi oyedwa futhi udinga ukulihambisa komunye, akulula njengoba ungacabanga. Zonke izikhathi zeWordPress zinezinto ezi-4… ingqalasizinda nekheli le-IP elibanjelwe kulo, i-database ye-MySQL equkethe okuqukethwe kwakho, amafayela alayishiwe, izingqikithi nama-plugins, ne-WordPress uqobo. I-WordPress inendlela yokungenisa nokuthekelisa, kepha ikhawulelwe kokuqukethwe uqobo. Akugcini ubuqotho bombhali, futhi akunjalo
NgoMgqibelo, Septhemba 8, 2012 NgoMsombuluko, Februwari 1, 2016 Douglas Karr
Ngenkathi kunethoni labantu embonini ecindezela i-WordPress, kungasabisa ngebhizinisi elincane ngaphandle kwe-tech savvy ukwenza ukwakha isibonelo sabo se-WordPress. Le infographic enhle ehamba umuntu noma iqembu ngokusebenzisa lokho abakudingayo ukukuqonda nokusetha lapho behlela futhi basebenzise isiza sabo se-WordPress. Ngiyayithanda le infographic ngoba idinga umsebenzisi ukuthi achofoze abheke ku-microsite exhumanayo ukuze abone